Imfundo engalinganiyo ibulala ikamva labafundi - HeraldLIVE
The Algoa Sun Imfundo engalinganiyo ibulala ikamva labafundi January 25, 2014
ASIYOMFIHLO into yokuba abafundi bafumana imfundo eyahlukileyo kwizikolo ngezikolo ngenxa yobutyebi nobuhlwempu babazali babo.
Urhulumente wethu uhlala ethembisa imfundo ekwiqophelo eliphezulu kubo bonke abantwana base Mzantsi Afrika, kodwa ayenzeki lo nto.
Xa ujonge izikolo ezixhomekeke kwisibonelelo sika rhulumente, ayothusi into yokuba abazali baya bakhupha abantwana babo babase kwizikolo ezisedolophini, nokuba iya batyabula epokothweni lonto.
Umahluko phakathi kwezikolo eziselokishini nezisedolophini ubonakala kuqala kwisimo sezakhiwo neeyadi zezikolo, phambi kokuba ungene ngaphakathi uwubone kubafundi.
Izikolo ezininzi elokishini azinawo amabala okudlala, azinawo namaphulo okuboleka iincwadi. Umzekelo xa uthatha umntwana ofunda ibanga lokuqala (Grade 3) kwisikolo esise lokishini nomnye ofunda kwelo banga kwisikolo esisedolophini ubeke incwadi phambi kwabo uthi mabafunde, omnye uyasokola kunomnye.
Inganezizathu ezininzi lonto – ziyanqongophala iincwadi kwezinye izikolo elokishini kwaye naxa zikhona, abafundi ababi namdla wokuzifunda kuba ukufundwa kweencwadi akuxatyiswanga.
Oku kungaxatyiswa kweencwadi nokungafundi kubonakala kwiziphumo zemviwo.
Iziphumo ze-Annual National Assessments zonyaka ophelileyo zibonakalise ukuba kubantwana abalishumi kwibanga lokuqala (Grade 3), phantse bane eshumini qha abakwaziyo ukufunda njengokuba bengaphantsi kwabathathu kwishumi abakwazi ukubala.
Kwabafunda ibanga lesine (Grade 6), bangababathathu eshumini abakwaziyo ukufunda nokubala. Iyaxhalabisa lento.
Iphulo elibizwa i-Rally to Read liye lazivusa ezingcinga kum emva kokuba ndiye ndaba yinxalenye yalo, apho inkampani u-Volkswagen Group SA no-Mercedes Benz SA zithi zithenge izixhobo zokufunda zizise kwizikolo ezise zilalini. Indlela abantwana bezi zikolo abazixabise ngayo iincwadi, indenze ndacinga ukuba ikhona imfuno yamaphulo anje nakwizikolo ezikwilokishi ezisedolophini.
Iziko lemveku lifumene inkxaso
Meating community needs